50w COB LED Kukura Chiedza 3500K / 5000K China Manufacturer
Tsanangudzo:50w COB LED Kukura Chiedza,COB LED Kukura Chiedza 3500K,COB LED Kukura Chiedza 5000K
 HomeProductsPH COB SeriesPH-B-L250w COB LED Kukura Chiedza 3500K / 5000K
50w COB LED Kukura Chiedza 3500K / 5000K
Muenzaniso Nha.: PH-B-L2
Chii COB chinokura chiedza?
Cree High-Intensity Cob Kukura Chiedza - Ichi ndicho chizere chakazara kukura nechiedza nezvidimbu zviviri zvecob LED. Phlizon Grow Cob LED Kukura Chiedza - Iyi yose yakazara kukura chiedza ine maitiro mashoma uye 50000 maawa ekushanda. ... Phlizon 250W COB Kukura Chiedza - ichi chizere chakasimba chechiedza chinokura nechidimbu chezvikamu zviviri zvemakabheji LED.
COB LED dzinokura magetsi dzakawanda chaizvoizvo, kuti dzinenge dzakakura nekota. Izvo zvose zvinosungirirwa nemuiti wehuni mubhodhi rimwe, iro rinowanzoitwa nemhangura kana ceramic. Kana ichibvira, zvisikwa izvi zvinoita sezviri kufanana nechigadziko chemwenje, kwete pane LED dzinoverengeka dzinongogara pamwe chete. Apo COB LED inokura magetsi inogadzirwa, murairi anogona kuva nemagetsi akawanda akatarisa pamiti yavo, asi nekusununguka kwekugadzirisa imwechete moduku. Uyu ndiwo musiyano mukuru pakati pezvigadzirwa zvemazuva e LED uye COB kukura magetsi. Asi iyi inongova imwe chete inobatsira izvi zvisikwa zvitsva zvinopfuura mamwe marudzi ehemp kukura magetsi. COB Cree Grow Lights ndezvakanaka kune varimi vari kutarisana nemagetsi anotsvaga eHPS uye vanoda kuchinje kune chimwe chinhu chichaita kuti chitonhore. Kunyange zvazvo LED dzichiwedzera magetsi dzinobudisa kupisa, maduku maduku haagoni kuunza kutonhora kwekukura kwako nzvimbo. Kunyange iyo mienzaniso yakasimba ye LED inokura mwenje inoita kuti huni huzhinji huripo huri mukati-muhutano hwekugadzirisa hutano kubatsira kudzivirira kutonhora kubva kumvura yakananga kumiti yako.
1000w 2000w 3000w 1500w akatungamirirwa kukura chiedza
Indoor kukura chiedza
COB series, simba guru rinonzi brand CREE COB nepamusoro Par value uye zvakadzama kupinda mukati
VEG / BLOOM uye STRONGER inoshandura imwe neimwe kukura.
Special spectrum yemiti inokura kuwedzera chibereko.
Kuvaka Kukohwa: Kunobatsira kudyara kusvika pakukura.
Mhando dzakanaka dzevhidhiyo nekunyorera mhere.
Zviri nyore kuisa nemaminiti
Simba Kuchengetedza, kugadzikana kwezvakatipoteredza
3 Makore Warranty
1000w 2000w 3000w 400w akatungamirira kukura chiedza parameter
Enzanisa naitungamiri kukura chiedza kune chetsika HPS / MH kukura
CHII CHINOGATSIRA KUCHIDZISA KUTANGA KWENYU?
1.PPFD Value: PPFD ndeye Photosynthetic Photon Flux Density. Paunosarudza chiedza chekusima, iwe unofanira kufananidza maonero ePFFD ezviedza zvakasiyana zvezvirimwa. Iyo yakawanda kukosha, zviri nani kukura kwemuti.
2 .Zvirokwazvo Simba: Nokuti simba remuti wekusimudza nguva dzose rinopesana nemamiriro akasiyana, vatengesi vose veAmazon vanoshandisa simba rakarongerwa kurondedzera simba rechigadzirwa nokuti simba rakarongeka rinoramba riripo. Paunosarudza LED inokura chiedza, simba rakarongeka rechimiro chechiedza nderokutaura, uye zvinonyanya kukosha ndiro simba chaiyo.
3.Core Coverage: Pamusoro pezvikamu zviviri pamusoro apa, paunosarudza chiedza chekusima, unodawo kuenzanisa nzvimbo yepamusoro yezviedza zvakasiyana zvezvirimwa, hongu, ukuru hwepakati pekugovera nzvimbo. Pakati pese, mukugadzira mbeu, unogona kuisa chiedza chekusimudza uye nzvimbo yakavharidzirwa yakakura. Muchiedza chemukati unogona kuisa chimiro chechiedza chiri pasi uye chivako chiri checheche nokuti chimiro chinoda kuwedzera chiedza pachigamba chino. Iwe unofanirwa kuenzanisa nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekugovera nzvimbo kuti usarudze chiedza chemuti chinokufananidza newe.
Hydroponics, Horticulture, Agriculture neGreenhouse
Nzvimbo: Farm, Exhibition, Garden, Home, Urban, Bonsai, uye University Lab
Kukura kwezvibereko, Veji, Maruva nezvimwe zvakadaro
Seeding, Rooting, Kubereka, Kuyerera uye Kuburitsa nguva
Shenzhen Phlizon Technology inogadzira zviratidzo zvekukura kwe LED kune dzimwe nyika dzakadai sechiremba, hurumende, mauto, zvekutengeserana, uye zvekurima .Makore anopfuura gumi anowedzera kutsvakurudza uye sangano rinokurudzira rinotarisa kukura chiedza. Vakawanda vakawana National Patents, Zvose zvakagadzirwa FCC uye ETL zvidzidzo. Tinopa High quality nemutengo unobhadhara. Zvimwe zvakawanda pamusoro peCOB yedu LED Kukura Chiedza, tapota tibvunzei zvakananga uye usunungure kugamuchira kushanyira kambani yedu uye tichakutorera iwe.
kutungidza mwenje kuti ikure, kukura magetsi, kukura mwenje kunotungamirirwa, kutungamirirwa kukura chiedza, kukura mwenje yemiti, kuwedzera kukura magetsi, t5 kukura mwenje kukura, kusima magetsi, kukura mabhuru, kutungamira magetsi, kutakura mwenje, kutungamirirwa kwemavara, kumhanya kwemukati, kukura kutungamira, kumera kwemukati, kutungidza mwenje, kukurira mwenje, , kukura, kutungamira magetsi, kutungamirirwa mukati mechiedza, kutungamira magetsi ekudzivirira mukati, kutungamirirwa kukura mababu, kutungamirirwa kukura magetsi, kutungamirirwa mberi kukura kukura , kukura nemwenje, kutungamira
1000w Cob Yakasimba Yemukati Inotungamirirwa Kukura Chiedza Bata Ikozvino
Phlizon 1000w COB Yakatungamirirwa Kukura Chiedza Bata Ikozvino
1000W COB Yakadzika Kukura Chiedza Chiedza Chiedza Bata Ikozvino
Yakanakisisa COB LED Kura Mwenje 1000W Bata Ikozvino
Yakanakisa Cree COB Kudza Mwenje Bata Ikozvino
Yakanakisisa Cob LED Kura Chiedza 2019 Bata Ikozvino
Phlizon CREE COB X2 245W Kura Chiedza Bata Ikozvino
Cree 1000W COB Kura Chiedza Bata Ikozvino
50w COB LED Kukura Chiedza
COB LED Kukura Chiedza 3500K
COB LED Kukura Chiedza 5000K
New COB LED Kukura Chiedza
COB LED Kukura Chiedza
600W COB LED Kukura Chiedza
CXB3590 COB LED Kukura Chiedza
1500W COB LED Kura Chiedza